SMT Technology - Pandawill Technology Co, Ltd.
Kuti tiendese kushanduka, kupindura, hunhu hwakanaka uye zvinotungamira-nguva zvinodikanwa, isu tinoramba tichiisa mari pane michina mitsva, maitiro uye zvakanyanya kukosha vanhu vedu. Iine ina yakazara yakanyatso kumisikidzwa yekumhanyisa SMT mitsara yekugadzira kukuru. Mutsetse wega wega une Desen otomatiki maprinta uye 8 zone ovhoni, yakabatana ne otomatiki anotakura uye ma loaders / unloaders, uye iri mu-mutsetse AOI system. Muchina wedu unokwanisa kubata zvinhu kubva ku0201 resistors kubhora grid array (BGA), QFN, POP uye akanaka pombi zvigadzirwa kusvika 70mm2.
Solder paste kudhinda inzira yakakosha, iyo yedu Desen otomatiki maprinta anowana nenzira kwayo uye zvinowirirana, iine yakavakirwa-mukati otomatiki yekuongorora kwekuongorora. Solder paste Reflow yakanyatsogadziriswa uchishandisa 8-zone convection ovens.
Yedu SMT Maitiro anotsigirwa zvizere nevanoziva IPC mainjiniya, vachishandisa echizvino tekinoroji michina yegadziriro yekumisikidza uye kuongorora. Magungano ese eSMT anoongororwa neOOI uchishandisa in-line AOI system. X-ray inowanikwa yakanaka tara uye BGA kuongorora.
Kudzora kwezvinhu zvinosanganisira kubheka hovhoni uye yekuchengetera yakaoma yekugadzirisa mamiriro. Nekuti kugadziridzwa uye kukwidziridzwa, maviri akashongedzerwa akakwana pombi / BGA rework zviteshi zviripo.